सेतोपत्र डेस्क शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९
झापा, बैशाख ३० । स्थानीय तहका लागि आज मतदान हुँदैछ । देशभरका ७५३ पालिकाहरुमा आज एकै दिन मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आज विहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । आज हुने मतदानको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले हिजो पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदानमा सहभागि हुन आव्हान समेत गर्नु भएको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्न देशभर १० हजार ७५३ मतदान स्थल अन्तर्गत २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रहरु छन ।
आज हुने मतदानमा देशभरबाट १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जसमा पूरुष ८९ लाख ९२ हजार १० जना र महिला ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना रहेका छन भने अन्य १८३ जना मतदाता छन ।
झापामा ६ लाख ४६ हजार २३४ जना मतदाता छन । झापामा सबैभन्दा बढी मेचीनगर नगरपालिकामा ९० हजार २०२ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ । झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा मा ३५ मतदान स्थलका १०२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ ।
मेचीनगरमा ७७ निर्वाचित हुने पदका लागि ३२० जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन । त्यस मध्ये मेचीनगर ११ की दलित महिला सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ भने बाँकी ३१९ उम्मेद्वारबाट ७६ जना निर्वाचित हुनेछन ।
आज हुने मतदानका लागि मेचीनगरमा १०२ मतदान अधिकृत सहित ८१६ जना निर्वाचन कर्मचारी खटिएका छन भने सुरक्षाकर्मी र पर्यवेक्षक समेत परिचालन गरिएको निर्वाचन अधिकृत फुयलले जानकारी दिनु भयो ।
मेचीनगरमा ४५११२ पूरुष र ४५०९० महिला गरी कुल ९०२०२ मतदाता रहेका छन । नगरको वडा नं. ६ मा सबैभन्दा बढी ११५२५ जना मतदाता रहेका छन भने सबैभन्दा कम वडा नं. ११ मा ३९९३ जना मतदाता रहेका छन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख ३०, २०७९, ०५:२४:००